जीवन र सञ्चिताको उत्कृष्ट केमिस्ट्री - 'राधा' समिक्षा | Hamro Patro
आखिर राधा को हुन त ?
जीवन र सञ्चिताको उत्कृष्ट केमिस्ट्री 'राधा' समिक्षा
'राधा' कथा हो सञ्चिता लुइटेलको । ट्राभल गरिरहेको बेलामा राधा अर्थात सञ्चिताको भेट राम अर्थात जीवनसंग हुन्छ । बिहा नगर्ने भनेर गाडिमा आमासंग फोनमा चिच्याइरहेको जीवनको कुरा सुनेर सञ्चिता जीवनलाइ सल्लाह दिन चाहान्छिन । तर दिक्क भएको जीवनलाई उसको सल्लाह पच्दैन, त्यसपछी दुवैको भेट घुमिफिरी एकै ठाँउमा भैरहन्छ । केही समय पछी दुवै एकै ठाँउ 'किनमेल.कम'को लागी काम गर्न थाल्छन । बिस्तारै जीवनलाई राधासंग प्रेम हुन्छ तर कथामा ट्विस्ट तब आउछ जब इन्टरभल अगाडी सञ्चितालाई प्रहरिले समातेर लान्छ ।
आखिर राधा को हुन त, त्यो ठाँउमा कहाँबाट आइपुगिन ? प्रहरीको फन्दामा कसरी पुगिन ? जीवनले उसलाई कसरी बचाउछ र अन्त्यमा के हुन्छ ? यो सब कुरा जान्नको लागी यहाँले चलचित्र राधा हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
चलचित्रको स्क्रीप्ट प्रदीप भार्द्वाजको हो । यो चलचित्र हेर्दा कतै कतै प्रदीप भार्द्वाजकै स्क्रीप्टमा बनेको चलचित्र 'आई एम सरी ' को झझल्को आउछ । किनभने प्रदीपको लेखनशैली दुवैमा उस्तै छ ।चलचित्रको कथाबारे कुरा गर्ने हो भने फिल्मको पहिलो हाफ उत्कृष्ट छ । रोमान्टिक कमेडी हावी भएको पहिलो हाफको कथा पटकथा र संवाद अब्बल दर्जाको छन् । तर दोस्रो हाफ भने पहिलो हाफको लेभलमा पुग्न सक्दैन । दोस्रो हाफ फितलो ड्रामातिर बग्छ र ड्रामा रुचाउने नेपाली दर्शकलाई यो मनपर्न सक्छ । तर दोस्रो हाफका ट्विस्टहरु चित्तबुझ्दो छैनन ।प्रदीप भार्द्वाजको लेखन पहिलो हाफ मात्र हेरेर भन्दा तारिफ गरिनुपर्ने खाल्को छ तर दोस्रो हाफमा मेहेनत नपुगेको देखिन्छ ।
चलचित्रको कुनै कुनै दृश्य र संवादहरु निक्कै पृथक र रमाइला छन् जस्तै जीवन लुइटेल र भिलेनको ग्रुपले फोनमा गरेको बोका बाख्री गफले खुब हसाउछ ।
जीवन लुइटेल रामको भुमिकामा निक्कै मज्जाले प्रस्तुत भएका छन यो चलचित्रमा । उनको कमिक टाइमिङ राम्रो छ । चलचित्रमा राधाको भुमिकामा नायिका सञ्चिता लुइटेलले कमब्याक गरेकी हुन । यो रोल उनकै लागी हो, र उनले आफ्नो कामलाई पुर्ण न्याय दिएकी छिन तर उनको काम पहिलो हाफमै सिमित छ, दोस्रो हाफमा मानौ उनि चलचित्रबाट हराउछिन । सञ्चिताले आफ्नो फिट्नेसलाई भने अलि ध्यान पुर्याउनु पर्ला । त्यसबाहेक चलचित्रमा 'किनमेल.कम'को म्यानेजरको भुमिका निभाएका कलाकारको अभिनय उल्लेखनिय छ । बाकी चलचित्रमा थुप्रै साहयक कलाकारहरु छन र सहायक कलाकारको छनौट राम्ररी गरिएको छैन किनभने उनिहरुको काम ले दृष्यलाई खल्लो बनाएको छ ।
मानकृष्ण महर्जनको छाँयाङ्कन अब्बल दर्जाको छ । अर्जुन जि सि को संपादन ठिकठाक छ, दोस्रो हाफमा फ्लासब्याकको सटहरु बढी भएको जस्तो लाग्छ । हिमाल केसी को द्वन्द्व पनि ठिकै मात्र छ । बिनोद शाँहको कला निर्देशन राम्रो छ । बसन्त सापकोटाका गीतहरु खासै छाप छोड्ने खाल्को छैनन् । बाकी कबिराज गहतराजको नृत्य केही खास छैन र एलिस कार्कीको पाश्र्व संगीतपनि मध्यम बर्गको छ ।
योगेश घिमिरेले चलचित्रको दोस्रो हाफमा निक्कै मेहेनत गर्नुपर्ने थियो । पहिलो हाफ बेग्लै स्तरको छ तर दोस्रो हाफ चुक्छ, बाकी उनको काम ठिकठाक छ ।
राधा चलचित्र जीवन लुइटेल र सञ्चिताको केमिस्ट्रीले गर्दा अब्बल बनेको छ तर पहिलो हाफ मात्रै, इन्टरभलपछी चलचित्र ले पकडेको ड्रामा र जीवन र सञ्चिता को संगै कुनै दृष्य नहुदा चलचित्र बोरिङ हुन पुग्छ । ड्रामा मनपर्ने दर्शक लाई भने यो चलचित्र पक्का मन पर्छ ।
हामी यो चलचित्रलाई कुल ५ मध्य २.५ अकं दिन्छौ ।